A Dụọla Ndị Bi n'Ime Ime Obodo Ka Ha Na-Echekwa Ihe Gọọmenti Rụụrụ Ha...
A kpọkuola ma dụọ ndị obodo dị iche iche ka ha na-echekwaba ihe dị iche iche gọọmenti rụnyere na mpaghara ha nà ngwongwo ndị ọzọ bụ ihe gọọmenti dị na mpaghara ha.
Obianọ Enyela Igwe Ụtụh na Igwe Lilu Asambodo Ịbụ Eze Ọdịnala Obodo Ha...
Obodo jupùtara nnọọ n'añụrị ụbọchị Tuzdee dịka aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ nyere ndị eze ọdịnala abụọ asambodo maka ịbụ igwe obodo ha dị iche iche. Ndị a bụ eze ọdịnala obodo Ụtụh dị n'okpuru ọchịchị Nnewi South na eze ọdịnala obodo Liilu dị n'okpuru ọchịchị Ihiala.
Obianọ Akpọkuo Gọọmenti Etiti Ka Ọ Kwụọ Anambra Ụgwọ O Ji Ya...
Ọchịchị steeti Anambra akpọnwèéla gọọmenti steeti etiti ka ọ kwụọ ya ego karịrị ijèri naịra iri anọ o ji ya n'ụgwọ, bụ ego e jiri dozigharịsị ụfọdụ ụzọ gọọmenti etiti dị na steeti ahụ.
Gọọmenti Anambra Amàlite Ịnwụchikọ Ndị Ji Ụmụaka Arịọ Arịrịọ...
N'agbam mbọ ahụ ọ bagidere iji kpochapụ ịtụ mgbere ụmụaka, inye ụmụaka ọrụ karịrị ha na iji ụmụaka eme ihe ọjọọ dị iche iche, kọmishọna steeti Anambra na-ahụ maka ọdịmma na ihe metụtara ụmụnwaanyị na ụmụ ntakịrị, bụ oriakụ Ndidi Mezue anapụtala ụfọdụ ụmụaka e ji arịọ arịrịọ n'ụfọdụ ebe dị iche iche na steeti ahụ, ọ kachasị n'Awka.
Òtù Ndị Nta Akụkọ n'Anambra Amàitela Izu Ụka Ndị Nta Akụkọ...
Òtù jikọtara ndị nta akụkọ n'ala Nigeria, ngàlàba ya nke steeti Anambra amalitela otu nnukwu mmemme omenahọ ha, bụ nke a kpọrọ izuụka ndị nta akụkọ.
Ndị Ọrụ Ahụike India Ebunyela COOU Ọtụtụ Akụrụngwa Ọrụ Ahụ Ike...
Ndị òtù ọtụ ahụ ike nke mbà India, n'okpuru Rotary International, District 3170 ebunyela ụlọ nkuzi ahụ ike nke mahadum Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu dị n'Amakụ Awka ọtụtụ akụrụngwa e ji arụ ọrụ ahụ ike dị iche iche, bụkwa nke ọnụ ego ya ruru ndé kwùrú ndé Naịra.
Ọrịa Kánsà: A Dụọla Ụmụnwaanyị Ka Ha Na-Enyocha Ara Ha Oge Ọbụla...
A kọwaala mmadụ inyocha ara ya na akụkụ ahụ ya ndị ọzọ nke ọma na oge ọbụla dịka ụzọ pụtakarịchara ìhè a pụrụ isi gbochie ọrịa nrechasị ahụ bụ ọrịa kansa ka ọ ghara ịgbasàwànyè.
A Gbapeela Ahịa Nkwọ Nando A Rụrụ Ọhụụ...
Dịka a sị na ihe ọma na-aka mma na ọhà mara, a gbapeela ọmarịcha ahịa Nkwọ ọhụụ ahụ a rụụrụ ndị Nando site n'aka otu nwaafọ obodo ahụ, bụ Chiifu John Iwunọ.
Iju Mmiri Agbàgbuola Nwatakịrị Gbara Ahọ Iteghete n'Ọgbaru, Anambra...
Nsogbu ahụ iju mmiri na-akpazị na steeti Anambra ugbu a ataala isi mmadụ ọzọ, dịka ọ gbàgbùrù otu nwatakịrị gbara naanị ahọ iteghete n'okpuru ọchịchị Ọgbarù, bụ otu n'ime mpaghara ebe ahụ ya bụ ọnọdụ kawanyegoro njọ.
Obianọ Ànabàtá Onyeisi Ụlọ Ọba Ego Mba Ụwa n'Ala Anyị. ■ Kwe Nkwà Ịkwàdò Amụmà Ha...
Aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Willie Obianọ nọrọ ụbọchị Tuzdee wee nabàta onyeisi ụlọ ọba ego mba ụwa, bụ Maazị Rachid Benmessoud na mmadụ iri ndị ọzọ ya na ha sòrò bịa na steeti ahụ.
Otu nwoke onye mba Amerịka na-eme ngagharị iwe nọrọ n’isi obodo Amerịka bụ Washington, taa bụ abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Ọkụtoba, kpọọ oku n’olu ike ka e kpee onye isi ala mba Amerịka ikpe maka inyere ndị Rọshịa aka n’igwu ojoro n’oge atụm vootu Amerịka gara aga.
Nwoke ahụ aha ya bụ Ryan Clayton chebiri Trump n’ogige Capitol Hill, ụlọ ọrụ ndị omebe iwu nke mba Amerịka.
Mgbe Trump na onye isi oche Sineti Amerịka, bụ Mitch McConnell, na-agafe, Ryan chịịrị flagụ ndị mba Rọshịa na-aja Trump. Ka ọ na-eme nke a, ọ saghepukwere ọnụ ya malite tiwe mkpu n’oke olu. Ọ na-ekwu n’olu bekee Trump is treason!, nke pụtara na Trump bụ onye arụrụala n’olu Igbo.
Ụnụ ga-echete na a na-ebo Trump na ndị otu ya ebubo na ya na ndị Rọshịa gbakọrọ aka were gwuo ojoro mere Trump jiri merie Hillary Clinton na ntuli aka ahụ e mere na mba Amerịka n’afọ gara aga.
Kamgbe ahụ ndị Amerịka mechara nhọpụta onye isi ala, ndị Amerịka ka na-eme nyocha. E mechara họpụta onye ọkaikpe pụrụ ịche, bụ Robert Mueller, onye ka na-eme nyocha maka nrụrụ aka ahụ a na-eme Trump na ndị Rọshịa ebubo ya.
Ọzụbụlụ Ewere Ọñụ Rie Ji Ọhụụ...
Njirimara, omenala na ọnatarachi ndị Igbo bụ nnọọ nke pụtara ìhè nso nso a dịka ndị Obodo Ọzụbụlụ, dị n'okpuru ọchịchị Ekwusigo nke steeti Anambra merùbèrè mmemme iri ji ọhụụ ha nke ahọ 2018.
Anambra Ejikere Idekọta Mmemme Niile A Na-Ahazi Na Steeti Ahụ Ka Ọ Dị N'Akwụkwọ...
Dịka a sị na ihe nwee oge, o nwee nkwádóbé, ọchịchị steeti Anambra akọwapụtala njikere ya idekọta ma chekwaba mmemme niile obodo dị iche iche na steeti ahụ na-eme, mgbe ha ji eme ha, nakwa ihe a na-eme na ya bụ mmemme, ọ kachasị ndị dabara n'agbata ọnwa Ekeresimeesi ahọ a wee ruo n'ọnwa Jenụwarị ahọ na-abịa abịa.